baye amathiphu, eside ziphumelela abesifazane namantombazane babo bonke ubudala. Uma une ucasukile noma ukucindezeleka, zama ukushintsha kwekhanda. Pixie-bob ukugunda izinwele - omunye zezinwele yesimanje kakhulu futhi ethandwa namuhla futhi ngesikhathi esifanayo akalilahlile ngokuhlathulula ukusebenza kwawo eminyakeni. "Pixie" lihunyushwe English lisho "Fairy", echaza kahle le kwekhanda.
Ukuza aphume endaweni yokugunda izinwele, uyozizwa Amazing - uzobhekana, ukubukeka kuyoba ekhululekile okuningi, futhi izici zobuso uyobheka elikhanyayo ngisho makeup ukukhanya.
ngabe nemibi ukugunda izinwele Pixie-bob? Izithombe zibonisa amantombazane nge ephelele amahle isitayela kanye upopayi izikhulu. Noma kunjalo, le kwekhanda has nezihibe. Kuyinto ngazo, mayelana nendlela ebeka Nobuchwepheshe haircuts Pixie-bob, sichaza kulesi sihloko.
izinzuzo ukugunda izinwele
izinwele ezinde iyona umcebo ongenambangi kwanoma iyiphi intombazane. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, le ntokazi uyacabanga ukuthi ukushintsha imicikilisho nge emakhiyubhi abese egeza ikhanda kokuthile nomusa kakhudlwana elula ngesikhathi kanye zabasebenzi, futhi akukho ngaphansi okumangalisayo ukubukeka.
Yiqiniso, ezifika engqondweni imicabango ushintsho olukhulu obuphelele. Nokho, akukho muntu wesifazane ufuna ukuba wesilisa. Yini engalungile ukugunda izinwele umfana, ngakho-ke kuba bokuhlukaniswa charm zobufazi, sibangela ubuhle eside-onezinwele ezimhloshana. Sicabanga kusuka bob ukugunda izinwele, Pixie? Izinwele sifushane, kuyoba umhlobiso yakho. Ngenxa okuhlukile ungakha njengabesifazane kanye kwekhanda nenhle.
Wazi kanjani ukuthi Pixie-bob amasudi wena?
Ukuhlolwa elula kuyatholakala zonke intokazi, ngaphandle asebenzise izinkonzo mastera- barber kuyoba indlela elandelayo. Ungakwazi ukugwaza izinwele ezinhlangothini emathempelini ngomsila noma bobby izikhonkwane. Hlola ubuso ezibucayi. Uma waneliseka, izici zobuso awubonakali incane kakhulu ukuba noma, kunalokho, ezinkulu, by Pixie-bob, oyingqayizivele, akufanele asebenzise. Siyobe niyikhulume zonke izinzuzo ukuthi lokhu kuyonikeza ukugunda izinwele, kanye amaphutha le kwekhanda.
Ezihlukahlukene zokusisebenzisa. Ifanele kwekhanda Pixie-bob futhi izinwele medium and iDemo. Akukona ngempela kunendaba kwekhanda ukuza barber. Inkosi onekhono ungazakhela cut njengabesifazane nganoma yisiphi izimo kokuqala.
Isikhathi esiningi ezikhungweni zokunakekelwa okungenani. Pixie-bob ukugunda izinwele kudingeka okungenani ube nesikhathi imoto. Wena ukunciphisa ukusetshenziswa amashampu futhi isimo, kanye ugcine isikhathi, ngokubeka izinwele. Odinga - kungcono kancane Foam noma eminye imikhiqizo isitayela, izinwele dryers, futhi akukho imizuzu engaphezu kuka-10 isikhathi. Voila - kwekhanda Chic ngomumo.
Ithuba lokuba ezahlukene nsuku zonke
Pixie-bob - kwekhanda zesifazane, okuyinto ikuvumela ukuba ushintshe isithombe sakho, njengokungathi ngomlingo. Chitha nezinwele ezinde ezimanzi ukuxubha ngokumelene ukukhula izinwele - futhi uzoba naughty futhi axokozelayo. Sebenzisa ngensimbi curling - futhi ungakha image bubuhle Eighties isitayela. Umshini wokomisa izinwele, ikamu kanye isitayela mousse kancane - futhi manje usukulungele ukuya disco ne intsha Mohawk. Ngomzamo omncane nje - futhi unayo ephelele izinwele isitayela "izinwele ukuze izinwele" iHhovisi anyanisi. ongakhetha Isitayela haircuts Pixie-bob isethi. ongakhetha isikhala fantasy yakho imidlalo lapho abangaphezu kuka-njengokungathi ubungumfazi umane izinwele ezinde.
ezilimele izinwele insindiso
Isikhathi esining impela, amantombazane bephoqeleka ukuba uthole nezinwele "umfana" hhayi ngoba bethanda, kodwa ngenxa izinwele ezilimele ukuze Umbala njalo. Khumbula Dasha Astafevu we iqembu "Nikita", okuyinto abalandeli amazed olulodwa ekubonakaleni enkundleni nalyso aphuce. Kodwa ngisho izinga ezimbi izinwele kungasindisa ukuguqulwa ezinhle. Uma sivala yakho eyomile khulu, amathiphu bafa futhi bekhathele beyingcuba ngenxa ukuchayeka njalo dryer ezishisayo noma ayina, le Pixie-bob uyosindisa izinwele zakho.
Believe me, ubude akunandaba uma izinga izinwele ayiyinhle. Iningi ubude "isipanji", kuphela, uyonikela zonke izikhundla ukugunda izinwele stylish. Susa kwangaphakathi izinwele buthakathaka iziguli, futhi uzobona ukuthi uyobheka enempilo futhi enhle ngesikhathi esisodwa.
Pixie-bob - kwekhanda zonke izinhlobo izinwele
Kukhona zezinwele ukuthi ayifanele ukuthi abanikazi izinwele esihle noma abacaphuni. Pixie-bob ukugunda izinwele ngeke ivumelane wonke ngothi lwawo. Ngisho noma yahlanganisa izinwele zakho e ringlets, lokhu ngeke kube isithiyo ukudalwa kwekhanda ukudlala.
Indlela ukugcizelela isithunzi. Uma une Whiplash noma izici ekhululekile ebusweni, ayikho indlela engcono ukugcizelela kubo kuka nezinwele Pixie-bob. Zama ukudala isithombe esisha, futhi uzobona ukuthi uyobheka ahlukene kakhulu, ngisho owayebonakala bheka omncane.
Haircut kwawo wonke amaqembu wobudala
Ngemva kweminyaka engu-amathathu, hhayi wonke owesifazane abagqoka izinwele ezinde. Futhi akusiyo ukuthi kuyoba nzima ngazo ukuba banakekele, kodwa ngenxa amabala njalo ngenxa grey. Kulokhu, kwekhanda Pixie-bob ukhetho ophelele kulabo abadala kunazo amathathu. Uyothola ubuso nezinwele enjalo, futhi ngeke balahle iminyaka kunabantu.
Akekho umuntu ongenayo uhlushwa ukushisa ehlobo. Haircut Pixie-bob ngeke ashisayo ngisho ngaphansi sezulu eyomile kakhulu,
Njalo izinwele buyekeza
Pixie-bob kudinga ukuvakashelwa wezinwele kanye ngenyanga - isigamu. Ngenxa sokuhambela njalo kuya salon ubuhle, ungakwazi ngokushesha balahle amathiphu posechennyh futhi ubuyekeze ubuhle izinwele zakho.
Ukuhlobana. Pixie-Bob ngabe ngokulinganayo ukubukeka kahle ejimini, imvelo ehhovisi noma umama wekhaya. Akunandaba ukuthi umsebenzi eniwenzayo, le kwekhanda ngeke ukuhlobisa wena uvumele ukubheka angenakuvinjwa, kungakhathaliseki lapho ukhona.
nebubi ukugunda izinwele
has kanjani izinzuzo ukugunda izinwele Pixie-bob! Ingabe ikhona downsides? Yiqiniso, noma ikuphi, ngisho kwekhanda obuhle babulawa noma ukugunda izinwele kwakuyodingeka nezihibe.
I ethile eyinhloko itholakala lokuthi uma usukhathele kwekhanda, isithombe nje ngeke bakwazi ukushintsha ngokushesha. Pixie-Bob lizisho agundwe kagologo, okusho ukuthi kufanele ulinde okungenani izinyanga ezimbalwa kuya Pixie-bob yaphenduka Quads.
Ububi - sokuhambela njalo wezinwele
Pixie-bob kwekhanda kudinga inani lemali elincane isikhathi sokunakekela, kodwa kuphela ngaphansi kwesimo ukuthi senziwa ngesandla i master abanolwazi futhi ulwazi olusha njalo. Nge nezinwele ezinjalo zidinga kuvakashelwa hair salon okungenani kanye ngenyanga nesigamu. Ngakho kulolu hlu izindleko ukuvakashelwa njalo master wezinwele.
Uma izinwele zakho asiphili ekuqaleni ifomu, zingabantu abezindaba eyomile khulu noma lonakele namadivayisi emakhiyubhi, le haircuts zokudala Pixie-bob ngeke isebenze. Khetha kakhulu elula, version zakudala, kungenjalo ngeke uthole umphumela oyifunayo.
Lungela ukunakekelwa nsuku zonke sobuso bakho
Pixie-Bob Ubuningi bamahora evulekile ubuso. Ngakho, wena ukubufihla ngemuva esiphongweni eside noma curls kucocekile. Lokhu kusho ukuthi zonke izinsuku kuyodingeka ichithe isikhathi sokusebenzisa izimonyo. Uma une kungekho nto enemibala emihle noma okhanyayo amashiya nemivimbo engu, bese ufaka izindleko adingekayo likayinki ipensela.
kwekhanda imfashini Pixie-bob akakubekezeleli ngisho nokuncane kukhanye ngaleso izimpande. Enye Ububi le kwekhanda angabhekwa yokuthi kufanele ugeze izinwele zakho nsuku zonke noma masonto kwezinsuku ezimbili. Njengoba kushiwo ngenhla, omile futhi wabeka nezinwele ezimfishane kungaba lula futhi ngeke kuthathe isikhathi esiningi, nokho ukuba zinakekele izinwele kuyodingeka okuningi kuka mhlawumbe wena bajwayele.
ukugunda izinwele zabesifazane "umfana" Ngokuqinisekile akambonanga ngalabo abesifazane abafuna ukubheka isifazane. Kodwa ungenza Pixie-bob nokuba singalahlekelwa ukukhanga yayo ngenxa wonke jikelele koHlelo sasekhaya we zezinwele. Nazi izici zalesi kwekhanda:
1. Bang. Side, etshekile, nepepper nobe aminyene - ungakwazi afake noma yiluphi uhlobo esiphongweni nge Pixie-bob. Kodwa lo mniningwane zezinwele kuzokusiza uhlale flirty futhi njengabesifazane.
2. Whisky. Hhayi ubaluleke kakhulu kangakanani ukuba sifishane whiskey, uma awubonakali kwakwakhiwa kakhulu indlela entsha. Ungacela ukunweba inkosi nogologo zombili noma omunye ngoba asymmetry. Ngaphezu kwalokho, whiskey side kungaba "ikhava" olukhulu ophumile izindlebe noma ukunciphisa cheekbones ophumile. Uma ujabulile kulo ubuso bakho, kuyoba mnandi kakhulu ukubheka ukuthi ukhetho - ngakolunye uhlangothi ukuze aphuce izinwele ethempelini, futhi ngakolunye, kunalokho, ukunweba.
3. nape. Okugqamile futhi ewubuciko kungaba aliphuce, kodwa uma besaba zokucwaninga, cela wezinwele yakho ukuze wenze ikhanda lakhe futhi ivolumu avaliwe.
Uma une izici ezinkulu noma ezincane, inkosi liyadingeka ukunikela ukuze uzizamele sideburns eside futhi kwabantu of esiphongweni. Pixie-Bob kufanelekile cishe wonke umuntu, futhi sibonga nangezindlela ungenza le kwekhanda ephelele. Tinker nje kuphela ukuba abanikazi ringlets, njengoba Pixie-bob kwalolu hlobo izinwele nzima isitayela. Ngaphezu kwalokho, ezinye wochwepheshe bakholelwa ukuthi yibo kuphela bengakwamukeli ukugunda izinwele Pixie-bob - a abanikazi ubuso round. Nokho, kukhona abalungisa izinwele abangakwazi ukuphikisa lo mbono futhi anikele extender nogologo zombili ngesikhathi ukugunda izinwele.
Technique wayegunda Pixie-bob Letingcikitsi kumele kube kuleto kunoma master professional. Hairstyle wenziwa phezu izinwele ezimanzi, wizadi uyezwakala conditioner kangako izinwele ulalele kangcono.
1. ugunda Pixie-bob ngoba nezinwele ezimfishane naphakathi obuphelele izinwele wenziwa kanje. Izinwele iwe ezindaweni occipital, yesikhashana futhi parietal endaweni "ukhamba". On endaweni occipital izinwele zihlukaniswe umuda ojame rwe kusuka phezulu.
2. ugunda Pixie-bob (isithombe kubonisa) kuqala hairline entanyeni. Master ukhetha ukukhiya izinwele, ukudansela isiginci sakhe kungenzeka futhi ngenxa yaleso sizathu lesi Strand ligxile obuphelele. Khona-ke, unelungelo futhi kwesokunxele akhethiwe control eyodwa zinyakaze ngaphezulu.
3. Ubude kwekhanda ekhethwe edging. Lapho wizadi izoqeda edging, lingena isikele endaweni entanyeni. Njengoba ukwanda ibanga kusuka entanyeni zinyakaze engela edonsa imicu. Lapho medium ifinyelela wezinwele indawo occipital, imicu kuthiwa edonswa 90 degrees.
4. Ngendlela efanayo edging ku amathempeli. Hair isiqeshana aphume amasu Samandla futhi, uphinde futhi badonswe 90 degrees.
5. Inkosi ke wabe vystriganiyu parietal zigaba, ezihamba kusukela sikelo umqhele nobuso. It ukhonza njengelungu nogologo mhlahlandlela.
Akubona bonke abalungisa izinwele usebenzisa le ndlela. Namuhla ungakwazi uhlangabezana endaweni yokugunda izinwele nge wizadi kuyosishukumisela sikelo maphakathi ngemuva ekhanda kusukela amathempeli, sostrig kancane kancane imicu. Indlela yokwakha ivolumu ngesikhathi amathempeli ngesikhathi ngemuva ekhanda? Kahle kwenza ngezithukuthuku umdlalo nge curls eside kanye imikhawulo tapering.
Isitayela kanjani Pixie-bob?
Ungakha ukubukeka la "nezinxushunxushu ophambili." Ukuze ufake lesi mousse izinwele ngaphambi igalelo omiswe bese ngqo ekusakazweni izikhatha zomoya oshisayo ezimpandeni. Ibhizinisi isitayela kusho umbhalo wekugcina lolungiswe emaphutsa ukugunda izinwele "izinwele ukuze izinwele". Kulokhu, ungakha ivolumu ngesikhathi izimpande. Izinketho ukudlala izitshela ukuthi une esiphongweni ngqo noma etshekile. Ungakwazi qondanisa, agwaze, usebenzisa hairpin nge sequins noma ufafaze lacquer kanye ayesebenza.
Ngokuvamile haircuts Pixie-bob, bob (isithombe esihlokweni) Kusho nezinwele ezimfishane, kodwa ungakwazi ushiye izinwele ezinde. Futhi ungazama, isibonelo, ukuhlala uthokomale ufunde wave ukukhanya. Iphutha ukudubula phasi ezinde ku curls ezihambisanayo.
Njengoba ubona, akukho kwekhanda ezihlukahlukene futhi kufanelekile yimuphi owesifazane ngokoqobo kuka Pixie-bob ukugunda izinwele. Front futhi bakhulise ukubukwa kungaba kakhulu iyashiyana onjani isithombe ufuna ukuzama - lukhuni, uyakhohlisa noma okujabulisayo, romantic.
Indlela sifake eluka itheyiphu e enhle?
Imisipha yentamo. Sakhiwo umsebenzi
I-Keratoma - iyini? Ukwelashwa kwesikhumba keratoma
Uneminyaka emingaki gxuma kungaba nge-parachute. Yokweqa, umfundisi kanye nezinye amaphuzu abalulekile